Ururka Taalibaan oo sii daayay Maxaabiis u dhalatay wadamada R... | Universal Somali TV
Ururka Taalibaan oo sii daayay Maxaabiis u dhalatay wadamada Reer Galbeedka
Ururka Taalibaan ayaa sii daayay laba maxbuus oo u dhashay wadamada reer galbeedka oo afduub ahaan ay ugu heesteen koonfurta Afghanistan.
Professor-da kala ah Kevin King iyo Timothy Weeks oo u dhashay wadamada Mareykanka iyo Australia ayaa lagu wareejiyay Milatariga Mareykanka ee ku sugan Afghanisan talaadada Maanta.
Ilo ka tirsan saraakiisha booliska ayaa sheegay in abaara 10:00 subaxnimo laga sii daayay barayaasha Jaamacadeed degmada Nawbahar oo dhacda gobolka Zabul deetana diyaarad nuuca qumaatiga u kaca ay ka soo qaaday Gobolkaasi.
Madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa 12-kii bishan November ku dhawaaqay heshiis la isku weydaarsanayo hogaamiyaha Ururka Xaqaani Anas Haqqani, iyo laba sargaal oo ka tirsan ururka Talibaan oo u xiran xukuumada Kabul.
Kooxda Talibaan ayaa dhankeeda laga dalbaday in ay sii deyso Kevin King iyo Timothy Weeks oo barayaal ka ahaa Jamaacada Mareykanka ee ku taala duleedka magaalada Kabul oo Afduub ay u heysatay kooxdan ka hor inta ay maanta sii Deynin.
Madaxweyne Ashraf Ghani ayaa rajo ka muujiyay in maxaabiis isweydaarsigaan uu wado u furayo wadahadalo toos ah oo dhaxmara dowlada iyo Maleeshiyadan oo marar badan uga ka biyo diiday baaqa xukuumada Kabul.
Kan-xigaDowlada Mareykanka oo taageertay deeg...
Kan-horeWasaarada Amniga Kenya oo kaalinta ko...
55,405,526 unique visits